Soosaarayaasha Ciyaaraha, Shirkadaha - Shiinaha Warshadaha Ciyaaraha Fudud
Naqshadeynta naqshadeynta ugu dambeysa ee naqshadeynta dharka 'Sock' ee loogu talagalay ragga
Fadhiga hore iyo fidinta xumbo sare oo ay weheliso farsamada sare ee FlyKnit waxay siisaa fuul aad u raaxo badan. Xirmooyinka xirniinka lebiska ah ee xarkaha u dhow dhow. Isku xirnaanta qaabka loo yaqaan 'Bootie-style collar' iyo carrabku waxay ku siinayaan raaxo hareerahaaga. Furaha jiidista iyo wareejinta fudud ee koodhka. Dhexgalka la saari karo Ku celcelinta barkinta qalabka celceliska waxay ka hortagtaa murugada waxayna dib u soo noqotaa tamar kasta iyadoo la adeegsanayo qalab yar oo loogu talagalay jawaabta iyo socodka fududaanaya inta lagu guda jiro socodsiinta. Caag korodhay oo ku taal bannaanka dusha sare waxay bixisaa jajabinta iyo durabilit ...
Dukaanleyda sare ee iibka cad cad ee ragga kabaha ugaarsada ayaa daabacda kabo madow oo wajiga ragga ah
Ku dhex dhaca shaqo maalmeedka caadiga ah ee tababarka maalinlaha ah iyo tababarayaasha jimicsiga jimicsiga. Mesh iyo flyknit sare oo leh qaab lagu dabiibo neefsashada. Xiritaanka suunka caadiga ah oo kuxiran suunka ciribta si cagaha oo dhan meesha loogu hayo inta lagu jiro tababarka culus iyo fadhiyada miisaanka oo bilaash ah. Carrab jilicsan iyo collar. Bootie dhismaha oo jiid tabiyaha ciribta si aad u dhakhso badan oo sahlan u dareento oo aad dareento Dahaarka mesh Neefsashada isku dhejin kara oo xirxiran. Midam foam wuxuu siiyaa dareen dabiici ah. Qalabka xoqida leh ee leh tufnaanta dabacsan ...
2020 kulul Sell style Knit dharka sare ee dharka jilicsan ee Classic Brand kabaha isboortiga Kabaha Kabaha Yeezy
Ku orod jimicsiga dhabta ah ee jimicsiga adoo caawinaya kabaha isboortiga ee flyknitting ee ragga. Cushioning: Jawaab fudud, jawaab dabacsan. Xiritaanka lebbiska Isku xirnaanta jilicsan iyo carrabku waxay bixiyaan raaxo agagaarka cidhibtaada. Dahaarka fidsan wuxuu bixiyaa dareemo aad u eg. Dhexgalka la saari karo Ku-celinta suuxinta waxay ka hortagtaa murugada waxayna dib u soo celisaa tamar kasta. Shelf ciribta waxay siisaa xasilooni sidii orodkaaga. Jumladaha xoqan waxay bixiyaan jahawareerka. Maqaalka Macluumaadka Waxsoosaarka No.: 5030 Magaca badeecada: kulul iibinta dharka dabiiciga ah ee toosan ee gogosha sarreeya ...
Kabaha jilicsan ee Dharka jilicsan ee Kabaha Kabaha Dumarka iyo Ragga
Ku bood oo jidkaaga ugu soo meer meer kulan oo kabo jilicsan oo kabo leh. Isku dheelitirka kaamilka ah ee u dhexeeya waxqabadka fudfudud iyo adkaysiga halka dusha sare laga helana waxay bixisaa ugu dambaynta cimri dherer badan. Dusha sare ee furfuran ee flyknit waxay bixisaa isku-dheelitirnaan wanaagsan iyo dareemid. Dhisidda booteelo aan kala go' lahayn oo fidsan oo raaxo leh oo aan fiicnayn. Xiritaanka lebbiska Xarkaha dharka lagu neefsado ee Neefta leh. Xakameysan xumbo kujira. Dhererka-dhererka buuxa ee buuxa ee loo yaqaan 'EVA' ayaa ah kaydinta culeyska culus ee culus, culeys khafiif ah iyo adkeysiga. Macluumaadka Alaabta A ...
Kabo gaar ah oo kabo isboorti isboorti lagu ciyaaro
Miisaan fudud, waxqabadka maxkamada ee aan u sadqeynaynin cimri dhererka waxaad ubaahantahay tababar ballaaran iyo tartan. Socotada jilicsanaanta ee abuureysa dusha sare dherer sare oo joogteeya culeyska fudud, waxqabadka neefsashada. Xiritaanka lebbiska Dharka sockliner dharbaaxada leh Xakameysan xumbo kujira. Mid-dhererka buuxa ee polyurethane midsole wuxuu siiyaa dib-u-celin u adkeyn leh oo ku saabsan barkinta jawaabta leh. Wejiga roondada wuxuu bixiyaa ugu dambeynta cimri dherer badan. Maqaalka Macluumaadka Alaabta Maya: 5027 Magaca badeecada: ...
2020 ragga cusub ee dharka jilicsan, sneakers jumlo loogu talagalay ragga kabaha isboorti
Ku soo celiso dhaxalkaaga wadada ama maalin kasta oo aad gasho kabaha cusub ee orodka. Hordhac: Waxqabadka Legend. Nooca Taageerada: Dhexdhexaad. Cushioning: Jawaab fudud, jawaab dabacsan. Dusha sare: Wadada. Fadhiga hore iyo midka hore ee nasashada badan waxay kuu fidisaa fuul raaxo badan. Khafiifa, mesh neefsashada kore. Xiritaanka lebbiska Qalin jeex jeexan iyo carrabku waxay ku siinayaan raaxo hareerahaaga. Furaha jiidista iyo wareejinta fudud ee koodhka. Dhexgalka la saari karo Phylon khafiif ah. Maqaalka Macluumaadka alaabada Maya: 5028 Pr ...